क्रिकेटका पाँच अप्रत्याशित क्षण | Hamro Khelkud
क्रिकेटका पाँच अप्रत्याशित क्षण
एजेन्सी – क्रिकेट विश्वकै लोकप्रिय खेलमा गनिन्छ । हरेक खेलमा अनुशासन निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । खेललाई अनुशासनभित्र राख्न आ–आफ्ना नियम हुन्छन् । नियममा उल्लेख नभएपनि खेलाडीले आफूलाई खेल भावनामा रहेर खेल्न अनुशासनमा रहनुपर्छ । अझ क्रिकेट त भद्रभलाद्मीको खेलका रुपमा परिचित रहेकाले अनुशासन र खेलभावनालाई निकै प्राथमिकतामा राखिन्छ ।
क्रिकेट एक रोमाञ्चक खेल हो । क्रिकेटमा कुनै भर हुँदैन । विशेष गरेर सिमित ओभरको खेलमा । अन्तिम बल र विकेट बाँकी रहँदासम्म खेलको नतिजा बदलिन सक्छ । पछिल्लो समय विकास भएको टि२० शैली र टि१० प्रतियोगिताले क्रिकेट आम समर्थकमाझ झनै लोकप्रिय बनाएको छ ।
तर कहिलेकाहीँ मैदानमा अप्रत्याशित घटना घट्ने गर्दछन् । जेन्टलम्यान मानिने खेलाडीले नै अनुशासन तोड्ने गर्दछन् । यस्ता दृश्यले समर्थकलाई आश्चर्य पार्छ । खेलको दौरानमा मैदानमा घटेका पाँच दृश्यहरुको छोटकरीमा व्याख्या गरिएको छ ।
५. अफ्रिदीले हात नमिलाउनु
पाकिस्तानका आक्रामक ब्याट्सम्यान शाहिद अफ्रिदी जब मैदान छिर्ने गर्दथे तब उनको ब्याटबाट निस्कने रनले समर्थकलाई निकै खुसी पार्दथियो । आक्रामक ब्याटिङका लागि परिचित बुम बुम अफ्रिदी पाकिस्तानका सर्वाधिक सफल अलराउन्डर खेलाडीमा पर्दछन् । पाकिस्तान र न्युजिल्यान्डबीचको २०१४ ओडिआई सिरिजको कुरा हो ।
यूएईमा पाकिस्तानको जितपछि पोष्ट म्याचमा रमिज राजाले अफ्रिदीलाई मास्टर ब्लास्टर अवार्डको लागि बोलाए । जसक्रममा उनलाई ५ सय अमेरिकी डरको चेक दिन प्रायोजकबाट एक महिला आएकी थिइन् । उक्त महिलाले अफ्रिदीसँग हात मिलाउन खोजेकी थिइन् ।
तर अफ्रिदीले नदेखे जस्तै गरे । उक्त महिला लाजले हाँस्न थालिन् । बाहिर पनि हाँसो थामिएन । तर अफ्रिदीको ब्यवहारले उक्त महिलालाई भने निकै कठिन र खिन्न भएको थियो । जुन क्रिकेट एक लाजमोर्दो क्षण थियो ।
४. मुस्तफा जर्सी लगाउँदै बल रोक्न खोज्नु
यूएईका अलराउन्डर रोहन मुस्तफा एसोसियट राष्ट्रका चर्चित नाम हुन् । पछिल्लो समय टि१० लिग लोकप्रिय हुँदै गएको छ । यसैक्रममा रोहन मुस्तफाले टिम आबूधाबीबाट नर्थन वारियर्सबीचको खेलमा रोचक घटना घट्यो । टि१० समर्थकका लागि निकै रोमाञ्चक खेल मानिन्छ । नर्थनले ब्याटिङ गरिरहेको थियो ।
तर मुस्ताफाले आफ्नो टिसर्ट परिवर्तन गर्दै थिए । त्यतिकैमा बल उनीतिर आएपछि उनी टिसर्ट लगाउँदै बल रोक्न खोजेका थिए । तर बल देखेनन् र चौका हुन पुग्यो । मुस्ताफाको उक्त अवस्थामा देखेर समर्थक र खेलाडी हाँस्न थाले । केहि दिनसम्म मुस्तफा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोलकै शिकार बनेका थिए ।
मुस्तफाले पछि ट्वीटरमा लेख्दै आफ्नो स्थितिबारे स्पष्टीकरण दिएका थिए । उनले अर्को ओभर बलिङका लागि स्वेटर खोल्न लाग्दा जर्सी पनि सँगै खुल्न पुगेको जनाएका थिए ।
३. म्याक्सवेलको बोल्ड आउट
अष्ट्रेलिया ब्याट्सम्यान ग्लेन म्याक्सवेल विश्वक्रिकेटकै एक खतरनाक ब्याट्सम्यान हुन् । उनले एकै ओभरमा खेललाई मोड्न सक्ने क्षमता राख्छन् । उनले थुप्रै पटक छक्का हान्दै बल स्टेडियम र पार्क पनि कटाएका छन् । २०१४ डिसेम्बरमा बिग ब्यास लिगमा मेलबर्न स्टार्सबाट ब्रिस्बेन हिटविरुद्ध म्याक्सवेल ब्याटिङ गर्दै थिए ।
लक्ष्य पछ्याउने क्रममा म्याक्सवेल पहिलो ओभरमै आएका थिए । तीव्र गतिका बलर रायन डफिल्डको बलमा अघि बढ्दै ठूलो सट खेल्न खोजेका थिए । तर दुर्भाग्य इन स्वीङबलमा बोल्ड आउट हुन पुगे । म्याक्सवेल उक्त बलमा हेर्दा हेर्दै बोल्ड आउट हुन पुगे । म्याक्सवेलले रमाईलोको लागि गरेका थिए वा अनजानमा त्यो प्रष्ट छैन ।
तर म्याक्सवेलको लागि यो आफ्नो करिअरकै सर्वाधिक खराब बोल्ड आउट थियो । उक्त बोल्ड आउट पछि म्याक्सवेल केहि समय हेरेको हेर्यै भएका थिए ।
२. हसन सेलिब्रेसन गर्दा घाइते
क्रिकेटमा सफलता पछि खेलाडी खुसी सेलिब्रेशन मार्फत ब्यक्त गर्दछन् । पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर हसन अलीको नाम लिँदा धेरैलाई २०१७ को च्याम्पियनशिप ट्रफीको याद आउँछ । उक्त प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ फाइनलमा भारतलाई पराजित गर्दै पाकिस्तानले उपाधि जितेको थियो ।
हसन अली त्यसपछि विश्व क्रिकेटमा प्रदर्शन र सलिब्रेशन दुवैमा चर्चित थिए । उनले विकेटलिए पछि गर्ने सेलिब्रेशन अझ रोमाञ्चक बनाउथ्यो । विकेट लिएपछि हसन अलीले दुबै हात एकै पटक फराउँदै सेलिब्रेशन गर्ने गर्दछन् । २०१८ मा पाकिस्तानले जिम्बावे भ्रमण गरेको थियो । हसन अलीले रयान मुर्रेलाई बोल्ड आउट गरेपछि दुबै हात उठाउँदै सेलिब्रेशन गरेका थिए ।
तर उनलाई उक्त सेलिब्रशेन निकै महँगो पर्यो । उनको घाँटी मर्किन पुगेको थियो । त्यसपछि हसन अली बाँकी दुई खेल गुमाउनु परेको थियो । जुन क्रिकेट इतिहासको एक लाजमर्दो र रोमाञ्चक क्षण थियो ।
१. खवाजाको मैदानमै गार्ड परिवर्तन
उस्मान खवाजा अष्ट्रेलिया शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यान हुन् । विग ब्यास लिग २०२०–२१ मा उस्मान खवाजाले सिड्नी थन्डर्सबाट ब्रिस्बेन हिटसँगको खेलमा मैदानमै गार्ड परिवर्तन गरेका थिए । गार्ड अण्डकोषलाई सुरक्षित राख्न ब्याट्सम्यानहरु लगाउने गर्दछन् ।
मैदानमै उनले आफ्नो ट्याग परिवर्तन गर्दै गार्ड लगाएका थिए । यसले खेलाडी र समर्थक दुबैलाई आश्चर्य पार्यो । सबै हाँसीरहे । खेलाडीहरुले आफूलाई असहज भएमा ड्रेसिङ रुममा गएर बदल्ने गर्दछन् । तर खवाजाले मैदानमै सबैको अगाडि परिवर्तन गरेका थिए । खवाजाले खेललाई बीचमै रोक्दै गार्ड मगाएर लगाएका थिए ।
खवाजाले खेल रोक्दै आफ्नो जुत्ता, प्याड, ट्राउजर खोल्दा के गर्दैछन् भनेर टिकाटिप्पणी गरिरहेका थिए । खेल केहि समय रोकिदा खवाजाले वैकल्पिक खेलाडीसँग गार्ड मगाउँदै परिवर्तन गरेका थिए । जुन क्रिकेटको यो एक लाजलाग्दो र आश्चर्यमा पार्ने दृश्य थियो ।